Hudheelka Blossom Houston wuxuu u fidiyay kooxo yabooh cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Hudheelka Blossom Houston wuxuu u fidiyay kooxo yabooh cusub
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Ku-darka ugu dambeeyay ee huteelka raaxada ee Houston, Blossom Hotel Houston waxa uu soo bandhigay tiro yaboohyo waqti xaddidan ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo qabanqaabiyeyaasha munaasabadaha si ay uga faa'iidaystaan ​​kulamadooda. Laga soo bilaabo helitaanka dhibcooyinka daacadnimada saddex jibaaran iyo ka-celinta ilaa 5% biilka sayidka ilaa kaydinta deeqsinimada leh ee qalabka maqal-muuqaalka ah iyo qiimayaasha la doorbidayo hoyga shaqaalaha, xirfadlayaasha MICE ee raadinaya inay martigeliyaan munaasabaddooda xigta ee Houston waxay heli doonaan wax badan oo ay jecel yihiin.
Inta u dhaxaysa hadda iyo 31ka Diseembar 2021, Horumarka Hudheelka Cusub waxa uu bixiyaa tanaasulaadyo gaar ah oo kala duwan.
La ballansan karo inta u dhaxaysa 1da Janaayo 2022 iyo 31ka Maarj 2022, Kobcinta Dhacdadaada waxay u ogolaataa la kulanka qorshayaasha faa'iidooyin dheeraad ah.
Hudheelka Blossom Houston waxa uu leeyahay 9,000 cagood oo laba jibaaran oo ah meel dhacdo hawlo badan leh oo loogu talagalay shirarka, shirarka isku-dhafka ah, bandhigyada ganacsiga, seminaaro, dib-u-noqosho fulineed, iyo aqoon-is-weydaarsiyo.
Waxay ku yaalliin meel u dhow garoonka NRG Stadium iyo Xarunta Caafimaadka Texas, Blossom Hotel Houston waxay ku faantaa 9,000 cagood oo laba jibaaran oo ah meel dhacdo hawlo badan leh oo sharfaya baahiyaha kala duwan ee koox kasta, oo ay ku jiraan heshiisyada, shirarka isku-dhafka ah, bandhigyada ganacsiga, siminaarada, dib u noqoshada fulinta iyo aqoon-is-weydaarsiyada. Hoolka shirarka ee ugu weyn, Luna Ballroom, wuxuu leeyahay awood maqal muuqaal ah oo casri ah wuxuuna qaadi karaa ilaa 250 qof, sidoo kale wuxuu leeyahay aag ballaaran oo horay loo sii qabtay. Iyada oo dejinteeda, dulucda midabka dayaxa-dhiirigelinta iyo taabashada luxe, qolka ballaadhku wuxuu bixiyaa goobta ugu habboon ee aroosyada iyo dabaaldegyada bulshada. Jabinta iyo shirarka yaryar waxaa lagu qaban karaa sagaalka qol ee shirarka dheeraadka ah oo leh qorshooyin dabaq ah oo dabacsan iyo qaabeynta fadhiga si loo waafajiyo qaab kasta oo dhacdo laga bilaabo fadhiga golaha fulinta iyo bandhiga qaabka masraxa quraacda isku xirka aan rasmiga ahayn iyo bandhigga iibinta farsamada.
Lagu dabaqi karo dhacdooyinka ugu yaraan 10 marti ah oo la ballansaday lana qabtay inta u dhaxaysa hadda iyo 31ka Diseembar 2021, Horumarinta Hudheelka Cusub waxay bixisaa tanaasulaadyo kala duwan:
5% laga dhimay biilka sayidkiisa dhammaan kharashyada xaqa u leh
Siyaasad dabacsanaan leh
Hal qol oo dhammaystiran oo ah 35 qol kasta oo la ballansan yahay
Kaydinta guryaha shaqaalaha
20% kaydinta qalabka maqalka
Wi-Fi-ga caadiga ah ee la seexdo iyo qolalka shirarka
10 kaadh oo baarkin ah oo bilaash ah.
La qabsan karo inta u dhaxaysa 1 Janaayo 2022 iyo 31 March 2022, the Kor u qaad Dhacdadaada dallacaadda waxay u oggolaanaysaa qorshayaasha shirku inay hayaan boos celin ugu yaraan 10 qol oo martida ah habeenkii iyo/ama ku kharash gareeyaan ugu yaraan $1,000 cuntada si ay u doortaan laba faa'iidooyin:
3% laga dhimay biilka sayidkiisa dhammaan kharashyada xaqa u leh
Hal nasasho oo kafee ah (60 daqiiqo oo adeeg joogto ah)
Wi-Fi-ga la xoojiyey ee ku habboon goobta kulanka
Dhibcaha Qorsheeyaha Abaalmarinta Saddex-jibbaaran Stash.
Hudheelkan oo ka kooban 16 dabaq ayaa waxa ka mid ah 267 qolal marti ah oo qaali ah iyo suullo ay ku nool yihiin oo balaadhan, iftiin badan oo dabiici ah iyo qurxin aad u yar. Hudheelka waxa kale oo uu bixiyaa adeegyo kale oo qaali ah, oo ay ku jiraan mid casri ah, 24/7 Xarunta Jimicsiga oo ay ku qalabaysay Peloton®; barkad saqafka sare ah iyo fadhi faan ah oo ku faanaya aragtiyo xaaqid ah oo ku saabsan magaalada hoose ee Houston. Si aad u hesho ballan-qaadyo iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dalabyada, fadlan booqo BlossomHouston.com.
Kooxda Blossom Holding waxay dhowaan soo bandhigi doontaa fikradeeda ugu horreysa ee Mareykanka, Blossom Hotel Houston, waayo-aragnimo caalami ah oo hal abuur leh oo si qoto dheer uga dhex jirta Space City. Hudheelku waxa uu dhigayaa martida wax yar oo ka fog xarunta caafimaadka ee ugu wayn aduunka iyo ganacsiyada ugu sareeya ee Houston iyo goobaha madadaalada, iyo sida hudheelka raaxada ee ugu dhow NRG Stadium, waxa kale oo uu daqiiqado u jiraa meelaha caanka ah ee Houston. Haddi ay u safrayaan baahiyo caafimaad, ganacsi ama raaxo, martidu waxay ku raaxaysan karaan kala duwanaanshaha Houston, taas oo sidoo kale ka muuqata huteelka huteelka ee xididada hawada hawada ee magaalada, iyada oo ka faa'iidaysanaysa dukaamaysiga tafaariiqda ee hudheelka, laba makhaayadood oo foojignaan leh, adeegyo aan isbarbar dhigin. iyo adeegyada, qolalka martida ee raaxada iyo dhacdooyinka badan iyo goobaha shirarka. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo BlossomHouston.com ama na raac on Facebook iyo Instagram.